जलविद्युत् कम्पनीको नाफा बढ्यो : १३ कम्पनीको ३ अर्ब | गृहपृष्ठ
सोमवार, फाल्गुन ६, २०७५
Home लगानी जलविद्युत् कम्पनीको नाफा बढ्यो : १३ कम्पनीको ३ अर्ब
on: २४ भाद्र २०७५, आईतवार ११:१२ लगानी
जलविद्युत् कम्पनीको नाफा बढ्यो : १३ कम्पनीको ३ अर्ब
७१ करोड आम्दानी
काठमाडौं । गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका १४ जलविद्युत् कम्पनीको नाफा औसतमा शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत बढेको छ । खानीखोला हाइड्रोपावरको नाफा ऋणात्मक भएकाले औसतमा नाफा जोडिएको छैन । १३ कम्पनीले विद्युत् विक्रीबाट रू. ३ अर्ब ७१ करोड ३२ लाख आम्दानी गरेका छन् ।
विद्युत् विक्रीबाट सबैभन्दा बढी आम्दानी चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीले गरेको छ । यस कम्पनीले विद्युत् विक्रीबाट रू. १ अर्ब १३ करोड आम्दानी गरेको छ भने नाफा रू. ९३ करोड ८७ लाख कमाएको छ । अरुण काबेलीले भने विद्युत् विक्री गर्न सकिरहेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेकाले विद्युत् विक्री गर्न नसकेपछि कम्पनी नोक्सानको अवस्थामा रहेको हो । कम्पनीको व्यावसायिक योजनाअनुरूप २५ मेगावाटको काबेली बी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले समीक्षा अवधिमा नोक्सानको आकार घटाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रू. २८ लाख ४४ हजार खुद नोक्सान बेहोरेको कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा रू. १६ लाख १४ हजार खुद नोक्सान बेहोरेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत १९ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये १४ ओटाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी कम्पनीहरूमा अपी पावर, दिव्येश्वरी हाइड्रोपावर, वरुण हाइड्रोपावर, नेपाल हाइड्रो डेभलपर र रैराङ हाइड्रोपावर कम्पनी छन् । हिमालयन पावर पार्टनरले गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे पनि कम्पनीको नाफालाई भने समावेश गरिएको छैन । हाल कम्पनीले आयोजना निर्माण गरिरहेकाले व्यावसायिक उत्पादन शुरू भइसकेको छैन । कम्पनीले प्रशासनिक खर्चलाई सोही आयोजनामा पूँजीगत गरेकाले आम्दानी तथा खर्च नरहेको प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवको चौथो त्रैमासमा ४ सय ५६ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासमा रू. २ लाख ५३ हजार नाफा कमाएको थियो ।
गत आवको सोही अवधिमा उसको नाफा रू. १४ लाख ७ हजार छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा अघिल्लो आवमा रू. ४२ लाख ३६ हजार रहेकोमा गत आवमा रू. ५६ लाख ६४ हजार पुगेको छ । त्यसैगरी छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ७२ दशमलव ७४ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो आवमा रू. ३८ लाख ६३ हजार रहेको कम्पनीको नाफा गत आवको चौथो त्रैमासमा रू. ६६ लाख ७३ हजार पुगेको हो । अरुणभ्याली हाइड्रोपावरको नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ६१ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो आवमा रू. ९ करोड ६ लाख रहेको उसको नाफा गत आवको चौथो त्रैमासमा रू. ३ करोड ५३ लाखमा सीमित भएको छ । कुल आम्दानी अघिल्लो आवको तुलनामा गत आव ४५ प्रतिशत घटेकाले नाफामा कमी आएको देखिन्छ । कम्पनीले विद्युत् विक्री आयबाट रू. ५ करोड २० लाख आम्दानी गरेको छ ।
नबिल बैंकको ३४ औं वार्षिक साधारण सभा फागुन २७ गते
म्याद थपिएको तेस्रो पटकमा पनि बनेन पुल, जिल्लावासी आक्रोशित
प्रभु बैंकको मूल्य समायोजन
सोमवार, ६ फागुन २०७५
विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरे ५ वर्षसम्म जेल
आईफोनको प्रतिस्पर्धी स्मार्टफोन ल्याउँदै गूगल
फ्रिक्वेन्सी बढाबढको टेण्डर प्रक्रियाको बाटो खुला
रू. २ अर्बमा दुई एटीआर जहाज भित्र्याउँदै यती एयर
प्रसारण लाइन निर्माण : ‘चुनौतीसँग सहकार्य गरेर सफल’
जनताको जलविद्युत् : १९ जलविद्युत् कम्पनीलाई अग्रिम आईपीओ सुविधा